नेपाली युवाले बनाए ड्रोन क्यामेरा - Rochak Khabar
नेपाली युवाले बनाए ड्रोन क्यामेरा
प्रकाशित मिति: शनिबार, फाल्गुण २६, २०७४ समय: १०:१२:००
स्याङ्जा : वालिङमा जन्मेका २ युवा र उनका सहकर्मी २ जना साथीले निर्माण गरेको ड्रोन क्यामेराको सफल परीक्षण गरिएको छ। क्यामेराको सफल परीक्षणपछि बिहीबार उक्त क्यामेरा वालिङ नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको छ। वालिङ घर भई भारतको बैंगलौरबाट इन्जिनियर बनेका ४ युवाले ६ महिनादेखिको अनवरत प्रयासपछि यो सफलता हासिल गरेका हुन्। उनीहरूले अध्ययनका क्रममा बैंगलोरमा बनाउन सिकेको ड्रोन क्यामेराको सीप प्रयोग गरी आफ्नै जन्मस्थलमा उपयोग गरेका हुन्।
मेकानिकल इन्जिनियर सृजन सुवेदी र इलेक्ट्रोनिक÷कम्प्युटर इन्जिनियर शरद तिवारीसहित उनका साथी अशोक धमलाहवा र आसनारायण पासवानको समूहले ड्रोन क्यामेरा बनाएका हुन्। एसएस टेक्नोलोजीको प्राविधिक सहयोग र वालिङ नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा रोबटिक्स र मेकानिकल इन्जिनियरबाट ड्रोन क्यामेरा बनाएको नगरपालिकाले जनाएको छ।
क्यामेराका लागि आवश्यक सामान खरिद गर्न मात्र खर्च गर्ने गरी ३ लाख रुपैयाँमा ड्रोन क्यामेरा बनाएको इन्जिनियर सृजन सुवेदीले जानकारी दिए। ‘क्यामेराले ७ किलोमिटर रेन्जमा तत्कालै प्रत्यक्ष भिडियो खिचेर पठाउँछ’, इन्जिनियर सुवेदीले भने, ‘ड्रोन क्यामेरा पूर्ण स्वचालित र भित्र अटोमेटिक पाइटल भएको क्यामेरा हो। यसको प्रयोग टेलिमेडिसिन, कृषि क्षेत्रमा हुनेछ।’
ड्रोन क्यामेराको प्रयोगबाट नगरपालिकाले विकास निर्माणका गतिविधि निरीक्षण, विद्यालयका गतिविधिको अवलोकन तथा वर्षात्का बेला आइपर्ने दैवीप्रकोपबारे कार्यालयमै बसेर तत्कालै जानकारी लिन सकिने वालिङ नगरप्रमुख दिलीपप्रताप खाँणले जानकारी दिए। नगरभित्रका जनशक्तिबाट निर्मित ड्रोन क्यामेराको सफल परीक्षण भएसँगै जिल्लाका धार्मिक, पर्यटकीय तथा ऐतिहासिक स्थलको कार्यालयमै बसेर तस्बिर लिन सकिने प्रमुख खाँणले बताए।
ड्रोन क्यामेराको सफल परीक्षणपछि वैशाखभित्रमा नगरपालिका कार्यालयमै इनोभेसन ल्याब सेन्टर सञ्चालन गर्न योजना अघि बढाइएको छ। सेन्टर स्थापनापछि नगरभित्रका विज्ञान विषयमा अध्ययनरत इच्छुक बालबालिकाले सूचना प्रविधि, रोबर्ट तथा ड्रोन क्यामेरा निर्माण गर्न आधारभूत सीप र ज्ञान सहज रूपमा पाउन सक्नेछन्।
बजारमूल्य करिब १३ लाख रुपैयाँ पर्ने क्यामेरा उनीहरूले ३ लाखमा निर्माण गरेका हुन्। ड्रोन आकाशमा उडेर तस्बिर लिने क्यामेरा हो। ड्रोन क्यामेराभित्र २ वटा क्यामेरा धान्ने क्षमता रहन्छ। क्यामेराले आवश्यकताअनुरूप सबै तस्बिर खिचेर पठाउने गर्छ। यसलाई रिमोट कन्ट्रोलबाट जमिनमै बसेर आफूले चाहेको क्षेत्रमा उडाएर तस्बिर तथा भिडियो खिच्न सकिने अर्का इन्जिनियर शरद तिवारीले जानकारी दिए।
२८ फागुन, काठमाडौं । सामसङले नेपाली बजारमा ग्यालेक्सी एस ९ तथा एस ९ प्लसलाई सार्वजनिक गरेको छ । एस ९ तथा एस ९ प्लस मा इम...
यो हो संसारकै सबभन्दा छिटो कुद्ने कार ! ३६।४४ सेकेन्डमा ४०० किलोमिटर प्रतिघन्टाको स्पीड समात्यो
काठमाडौं – संसारकै तिव्र गतीमा कुद्ने कारको आविष्कार गरिएको छ । स्पोर्ट्स कार बनाउने स्विडिश कम्पनी कोएनिग्सएगको अगेरा आ...
यी दुई वर्षीय बालकले गलत पासवर्ड हान्दा ४७ वर्षका लागि लक गरिदिए आईफोन, कम्पनीले भन्यो कुनै उपाए छैन
एजेन्सी – चीनको संघाईमा २ वर्षीय बालकले आफ्नी आमाको आईफोनमा गलत पासवर्ड हान्दा ४७ वर्षसम्का लागि लक भएको छ । अब यो आईफोन...
एजेन्सी: आईफोन अनलक गर्नका लागि सन् २०१६ मा अमेरिकी संघीय जाँच ब्यूरो (एफबीआई) र एप्पलबीच एउटा ठुलो लडाइँ नै भयो । एप्पल...
भारत भन्दा नेपालको इन्टरनेट स्पिड प्रभावकारी, वक्ला’ को रिपोर्ट अनुसार कुन देश कति स्थानमा ?
काठमाडौ । मोवाइल इन्टरनेट स्पिडमा भारत नेपालभन्दा पछाडि परेको छ । इन्टरनेटको गति मापन गर्ने लोकप्रिय सेवा प्रदायक ‘वक्ला...
मोबाइलको स्क्रिन सफा गर्ने सबै भन्दा राम्रो तरिका
महँगो मोबाइलको स्क्रिनमा फोहोर लाग्ने, दाग बस्ने, कोरिनेजस्ता समस्या हुन्छन् । यस्ता समस्याले स्क्रिन नै नराम्रो देखिन्छ...